Layma's World: February 2008
Posted by lay-ma at 2:15 AM 13 comments Links to this post
Posted by lay-ma at 12:01 AM 8 comments Links to this post
Posted by lay-ma at 2:50 AM 14 comments Links to this post
ဘုံဘေဘားမား သစ်ကုမ္ပဏီ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မျက်နှာဖြူ အစိုးရက ရာဇသံ ပို့လာတယ်…။ ကင်းဝန်မင်းကြီးက ပြေပြေလည်လည် ညှိနှိုင်းဖို့ မင်းတရား ကို လျှောက်တယ်…။ “ ဟဲ့..အပျိုတော်တွေ ဖိုးဖိုး ကင်းဝန်ကို ထမီတစ်ထည်နဲ့ ယပ်တောင် တစ်ချောင်း ရှာ ပေးလိုက်စမ်း…” လို့ ပြောပြီး စုဖုရားက စစ်ကြေငြာစေခဲ့တယ်…။ မြန်မာ့သွေး ...ရဲကြောင်းပြရမယ်လေ…။ မြန်မာတပ်မတော် တပ်မှူးတွေကို စုဖုရားကိုယ်တိုင် တွေ့ ဆုံ အားပေးပြီး စေလွှတ်လိုက်တယ်…။
Posted by lay-ma at 1:00 AM 11 comments Links to this post
Posted by lay-ma at 1:38 AM 8 comments Links to this post
Posted by lay-ma at 12:27 AM5comments Links to this post
Posted by lay-ma at 11:49 PM 8 comments Links to this post
လေးမက မနေနိုင်… မထိုင်နိုင် ဘလော့ဂ်ဂါချင်း ရင်းရင်းနှီးနှီး အတွေ့ အကြုံ…အယူအဆ ဖလှယ်စေလိုသော စေတနာနှင့် tag game ဆော့မိရာမှ tag game အပေါ်ထားသော ထို blogger ၏ သဘောထားကြောင့် heart ထိသွားပါသည်...။
“…ကိုယ် မလုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်ကို ကိုယ်ပျော်ဖို့ အတွက် သူများကို လုပ်ခိုင်း ဖို့ စဉ်းကို မစဉ်းစားတာဗျ ...”
Posted by lay-ma at 4:23 AM 21 comments Links to this post
Posted by lay-ma at 6:54 PM 14 comments Links to this post
လေးမ တစ်ယောက် ပို့စ်လည်းမတင်…အိမ်လည်း သိပ်မလည်…. cbox မှာလည်း တစ်ယောက်ချင်း ပြန်မပြော … ။ ဘာများဖြစ်နေပါလိမ့်လို့များ…တစ်ယောက်တစ်လေလောက်… လေးမကို သတိရပေးနေမလား…။
အကယ်ဒမီပွဲရှိနေတာနဲ့… လေးမ အလုပ်များနေတယ်လို့ ထင်နေမလား…။
ဟဲ…။ မဟုတ်ပါဘူး…။ လေးမတို့ အလုပ်မှာ ဘီလူးကြီး သောင်းကျန်းနေတာနဲ့ လေးမ တစ်ယောက် အရင်ကလို အလုပ်ချိန်မှာ internet သုံးလို့မရတော့ပါဘူး…။
အိမ်ပြန်ရောက်ရင်လည်း အရမ်းပင်ပန်းပြီး ခဏလောက်လှဲလိုက်တာနဲ့ အိပ်ပျော်သွားရော…။ တရေးနိုးတဲ့ အချိန်က ည ၁၁ နာရီ…ဆိုတော့…ဆိုတော့…ဆိုတော့….။
ဒါပေမယ့်… ပျောက်ကျားစနစ်နဲ့ လေးမ ဆက်လက် ရှင်သန်နေလိမ့်မည် ဟု… အသိပေးအပ်ပါသည်…မိတ်ဆွေတို့….။ ။
Posted by lay-ma at 12:16 AM5comments Links to this post
Posted by lay-ma at 12:28 AM 19 comments Links to this post
ဘ၀ကို တစ်ယောက်တည်း လျှောက်နိုင်တဲ့ အစွမ်းအစတွေ ရှိအောင် လေ့ကျင့်ထားပြီး .... တစ်ယောက်တည်း ရပ်တည်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ မိန်းမ တစ်ယောက်အတွက် … ရတာမလို…လိုတာမရလို့ ...ရရာ ဖမ်းဆွဲရတဲ့ ... အဖြစ်မျိုးဆိုတာ မရှိနိုင်ပါဘူး…။ စကားလုံးတွေက ချဉ်စရာ ဖြစ်နေမလား…မသိဘူး… ထိုစဉ်ကတော့ … ငယ်တုန်း..ရွယ်တုန်း…အောင်မြင်တုန်း..မာနတွေ တလူလူတက်နေတုန်း… အတ္တတွေ မိုးမွှန်နေတုန်းဆိုတော့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို အားကိုးစရာ မလိုဘူး ဆိုတဲ့ ... အတွေးတွေနဲ့ ကြွေးကြော်ခဲ့တာပါ… ( ခုတော့ မရှိလို့မဖြစ်ဘူး … ကြောက်တယ်… အားငယ်တယ်… ဆိုတဲ့ စကားတွေ တွင်တွင်သုံးပြီး ပုဆိုးစ ဆွဲထားတာ… :P မိန်းမ မာယာ တဲ့ နော်… မှတ်ကြ..မှတ်ကြ… ) …။ ။
Posted by lay-ma at 6:26 PM 11 comments Links to this post
အသက် ၂၀ နှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့ လူတိုင်း လူတိုင်းဟာ ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ လက်တွဲဖော်တွေကို အနည်းနဲ့ အများတော့ စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ကြဖူးမှာပဲ…။ လက်တွဲဖော်ကို ဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်… ဘယ်လိုအရည်အချင်းတွေနဲ့ ပြည့်စုံရမယ်… လို့ တစ်ခါနှစ်ခါလောက်တော့ တွေးခဲ့မိမှာပဲ…။
ချစ်သူကို ဘယ်လိုပုံစံမျိုး ဖြစ်ရမယ်လို့ ကန့်သတ်လို့မရပေမယ့် လက်တွဲဖော်ကိုတော့ စံချိန်စံနှုန်းတွေ သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်…။
ဟာဟ… ခုလို ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် နိဒါန်းချီထားတာလေးကို ဖတ်ပြီး လေးမ တစ်ယောက်တော့ အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မှတ်သားနာယူ ဆင်ခြင်တွေးတောဖွယ်ရာတွေ ရေးတော့မယ်ထင်တယ်ဆိုပြီး စိတ်ဝင်တစား မျက်လုံးကြီး ပြူးပြီး ဖတ်နေတဲ့ ဘော်ဒါတွေကို အားနာပါတယ်…။
လေးမက ဘ၀လက်တွဲဖော်ရွေးဖို့ “ ဟိုလိုလုပ်ပါလား…ဒီလိုလုပ်ပါလား…( ငါလည်း လုပ်တတ်ဘူး) ” ဆိုတဲ့ ပညာပေးစာ ရေးမှာ မဟုတ်ပါဘူးရှင်…။
လေးမ ဘ၀ရဲ့ လက်တွဲဖော်ကို ဘယ်လို စံနှုန်းတွေ သတ်မှတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ပြောပြမလို့ပါ…။
အယူအဆမှားခဲ့တာတွေလည်းပါခဲ့တယ်… မှန်ခဲ့တာတွေလည်းရှိမယ်… အမှားအမှန် မဝေခွဲနိုင်တာတွေလည်းရှိတယ်…. ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ဖူးတာတော့ သေချာတယ်…။
လက်တွဲဖော်ကို စံနှုန်းနဲ့ ရွေးတာပါဆိုတော့ ကြီးကျယ်လိုက်တာ … အံ့သြစရာပဲ … အမြင်ကတ်စရာပဲ လို့ တွေးကောင်းတွေးကြလိမ့်မယ် …။ လေးမမှာ အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်…။
အချစ်ဆိုတာ ဘ၀မှာ အကြိမ်ကြိမ် restart လုပ်လို့ရပေမယ့် လက်ထပ်ခြင်းဆိုတာ မြန်မာအမျိုးသမီး တစ်ယောက်အတွက် restart မလုပ်ထိုက်တဲ့ အရာပါ…။
အဲဒီအတွက် လက်တွဲဖော်ကို သေချာ စဉ်းစားသင့်တယ်လို့ လေးမ ယူဆပါတယ်…။
ကဲ..ကဲ..ဒါတွေက အားလုံးသိပြီးသား…ချရာမလုပ်တော့ဘူး… ။ လေးမ လက်တွဲဖော်အတွက် ဘယ်လို မူတွေ ဘောင်တွေ ချမှတ်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတာပဲ ရေးတော့မယ်…။
အပိုင်း (၂ ) မှာ ရှုလော့... .ဟိ..ဟိ… အိပ်ပြီ…။ ။
Posted by lay-ma at 4:26 AM4comments Links to this post